Teendhada Camping biyuhu, Hurdada Bag, cuno Buste, Beach tuwaalka - Camping Green
Boorsada lagu seexdo
tuwaal engegan deg deg ah
cusub oo isticmaalaysa zone & link pas
Real House teendhada
ultralight ee tayada sare ee bacda hooyaday hurdada
Boorsada lagu seexdo shiraac
Haddii teendho waa biyuhu aan la xiriirin oo kaliya in ay column inta biyo ah dhar ah, waxa ugu muhiimsan waa design iyo sanco. Waxay arrintu u muuqataa fudud, laakiin aan u saami teendhooyinka suuqa ma aha biyuhu, xitaa waxaa ku xusan biyo column 5000mm. Thanks for qalabka baaritaanka roob gudaha, taas oo ka dhigi waxaa suurto gal ah in roob light in mar walba digniin, waxa ay naga caawiyaan si aad u ogaato suurtogalnimada kasta oo dareere deynayo in ay na loo hubiyo in ay awoodaan in ay soo saaraan teendhada biyuhu dhamaystiran.
Waa maxay dhismaha tolidda bacda hurdada aad ka? Waa si fiican in uu taam u ah ujeedada? Ma badeeco idiin sheegay oo dhismaha loo isticmaalo bacda aad hurdada iyo feature ee dhismaha kasta? Sida caadiga ah, waxaa jira 2 dhismaha kala duwan ee suuqa, qolkii H iyo double H chamber.The H Chamber waa dhismaha ugu fudud oo ugu caansan, tolo qolof, ningax iyo si toos ah wada diyaarineysa. Dhismaha waxaa inta badan loo isticmaalaa daydo xagaaga-guga.
Ma og tahay inta lakab oo aad buste geeduhu, waxa gudaha? Waa maxay feature mid kasta buste geeduhu kala duwan? Waxaa caadi ka samaynaysaa jidka this. Looxa, dhogorta Polar & caag daabacay sida alaabo top, PE & aliminiyum, PEVA, biyuhu Oxford sida ugu hooseysa. Isbonji & caag fiber sida wax dhexe. Qaar ka mid ah buste geeduhu kaliya 2 layers. Waxaad ka heli kartaa alaabta kala duwan ee suuqa, noo, waxa dhibaato ah ma. Waxaana u soo bixinnaa in ka badan 1,000,000 bustayaal geeduhu kala duwan, waxaan ahay kalsooni waxaan leenahay wax kugu habboon. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan hubi at FAQs ama nala soo xiriir.